Donuts nendasina, misy leviora mpanao mofo | ThermoRecipes
Donuts nendasina, misy leviora mpanao mofo
fitsangatsanganana150 minitraOlona 16130 kaloria
Tonga izao ny tolakandro mangatsiaka sy orana, izao no fotoana tsara indrindra hanomanana ny fomba fanamboarana toy ny ankehitriny. Ny donut nendasina izay hataontsika dia vita amin'ny masirasira an'ny mpanao mofo noho izany dia mila manaja ny fotoana ilaina amin’ny fampitomboana ny koba isika.
Ao amin'ny horonan-tsary dia ho hitanao ny zava-drehetra. Handeha hanomana ny koba ao amin'ny Thermomix, dia avelantsika hiala sasatra izy dia hozaraina ary hamolavola ny donuts. Avy eo, aorian'ny fialan-tsasatra hafa, dia hanendasantsika azy ireo amin'ny menaka tanamasoandro be dia be.
Izy ireo dia manankarena vao vita (mbola mafana) ary koa hatsiaka. Ampirisiho ny tenanao hanomana azy ireo satria miasa tsara ny koba.
Eto ianao dia manana ny fomba fahandro ho an'ny sasany donuts nendasina samihafa, anise sy kanelina. Tsy toy ny amin'izao fotoana izao, ireo izay ho hitanao ato amin'ity rohy ity dia vita amin'ny masirasira simika.
1 Donuts nendasina, misy leviora mpanao mofo
Sakafo hafa izay voaomana miaraka amin'ny akora vitsivitsy.
Fotoana hiketrehana: 2H
Fotoana manontolo: 2h 30M
Rano 275 g
25 g masirasira an'ny mpanao mofo vaovao
500 g ny lafarinina varimbazaha
Menaka tanamasoandro be dia be ho endasina
Siramamy sy kanelina ho an'ny koba
Apetrakay ao anaty vera ny rano, ny masirasira ary ny siramamy. Izahay dia manao fandaharana 2 minitra, 37º, hafainganana 1.
Manampy ny lafarinina sy ny sira ary ny menaka izahay. Programa izahay 5 minitra, hafainganam-pandeha.
Mametraka ny koba eo ambony latabatra isika ary manamboatra baolina miaraka aminy. Ataontsika ao anaty vilia izany ary avela hitsangana mandritra ny adiny iray eo ho eo.
Aorian'io fotoana io dia mametafeta azy indray isika ary mizara azy amin'ny ampahany 16.
Manangana donut amin'ny ampahany tsirairay, araka ny hita ao amin'ny horonan-tsary, ary mametraka azy ireo amin'ny taratasy fanaova. Avelantsika hitsangana mandritra ny 30 minitra eo ho eo.
Mametraka menaka tanamasoandro be dia be ao anaty vilany. Rehefa mafana ny andro, dia endasinay ny donuts, ary manendy azy ireo amin'ny lafiny roa.
Esorinay amin'ny takelaka misy taratasy misy menaka izy ireo.
Alohan'ny hampanginana azy ireo, dia mametaka azy ireo amin'ny siramamy sy kanelina isika.
Ary vonona. Mahafinaritra izy ireo na mafana na mangatsiaka.
Ny koba dia azo aroso amin'ny hodi-boasary makirana, hodi-boasary, lavanila, anise ...
Azo atao (ary soso-kevitra) ny hampihenana ny habetsaky ny masirasira fa tsy maintsy hampitombo ny fotoana fiakarana.
Fanazavana fanampiny - Anise nendasina sy kanelina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Donuts nendasina, misy leviora mpanao mofo
Camembert casserole misy voatabia maina